မဒမ်ကိုး: အိမ်မှာမစိုက်သင့်တဲ့သေစေနိုင်တဲ့အဆိပ်သင့်အပင် ၈ မျိူး
အိမ်မှာမစိုက်သင့်တဲ့သေစေနိုင်တဲ့အဆိပ်သင့်အပင် ၈ မျိူး
ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပန်းလှလှလေးတွေမျိူးစုံရှိကြတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဆောင်းတွင်းလိုအေးတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာအပွင့်များတာပေါ့လေ။ တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတော့အရောင်အသွေးပိုစုံလင်တဲ့ ပန်းလေးတွေပွင့်ကြတာများသောအားဖြင့်တော့အိမ်ရှင်မတွေအမျိုးသမီးတွေသဘောအကျဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အရင်တုန်းကတော့သဘာဝအပင်တွေကိုသယ်ကြယူကြပွားကြရင်းနေရာအနှံ့ကိုသယ်ဆောင်လာကြတယ်ပေါ့။ခုတော့ နိုင်ငံခြားစပ်မျိူးတွေပါမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာမို့ပန်းမျိူးတွေဟာတော်တော့်ကိုစုံလင်လာတာကိုတွေ့နေရပါပြီ။
အဲဒီမှာပန်းချစ်သူတွေသတိမထားမိတဲ့အချက်တွေရှိလာပါပြီ။အဲဒါကတော့တချို့ပန်းလေးတွေဆိုသိပ်လှပါတယ်။အဆုပ်လိုက်အခိုင်လိုက်ပွင့်ကြ။အရောင်အသွေးတွေစုံလင်လှတာမို့တတခါတလေစာရေးသူကျွန်မတောင်မြင်ရင်အားပါးတရနမ်းရှုံ့လိုက်တာမျိုးခူးပန်တာမျိုးတောင်လုပ်မိတယ်ဆိုပါတော့။အဲဒီမှာပြသနာကစတာပါ။
တချို့သောပန်းတွေဟာဆေးဖက်ဝင်သလိုဘဲတချို့သောပန်းတွေကတော့ဆန့်ကျင်ဖက်လူ့အသက်ကိုတောင်နုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ခုကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အိမ်တွေမှာမစိုက်သင့်တဲ့ပန်းပင်၈မျိုးပေါ့။အရမ်းကိုအဆိပ်ပြင်းပါတယ်။ဒီထက်မကလဲရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ခုလောလောဆယ်မှာဖတ်မိတဲ့ဒီရှစ်မျိုးကတော့အဆိပ်အပြင်းဆုံးနဲ့လူ့အသက်ကိုအန္တာရာယ်ပေးနိုင်ပြီးအိမ်တွေမှာလုံးဝမစိုက်သင့်လို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီပန်းတွေဟာ အော့အန်ခြင်း၊၀မ်းသွားခြင်း၊အသက်ရှုကြပ်ခြင်း၊၀မ်းဗိုက်တခုလုံးနာကျင်ခြင်း၊အသက်ရှုမ၀ဖြစ်ပြီးနှလုံးခုန်ရပ်ဆိုင်းပြီးသေဆုံးသွားနိုင်တဲ့အထိကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။.
ဥပမာပေါ့။။အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကသွားပြီးယက်ပြီးပင်စည်ကိုကိုက်မိတာစားမိတာမျို၊၊ပန်းကလေးလှလို့ကလေးကိုခူးပြီးကလေးလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာမျိုးမှာလူကြီးတွေမသိမမြင်ခင်ကလေးကပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တာမျိုးပေါ့။အဆိပ်တွေတန်ခိုးပြလို့သိပ်ပမာဏမပြင်းဘူးဆိုရင်တော့ကလေးကငိုမယ်အီမယ်မျက်နှာတွေနီရဲပြီးအသက်ရှုရကြပ်နေမယ်ဝမ်းသွားမယ်။သိပ်များပြီးကိုယ်ခံအားလည်းနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ဆုံးနိုင်တာပေါ့။ဒါ့ကြောင့်ပန်းလှလှလေးတွေမြင်တိုင်းလဲမိမိကလေးလက်ထဲကိုမထည့်ပေးဖို့သတိချပ်သင့်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအနားမှာဒီလိုပန်းတွေမစိုက်တာမထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ကျန်တဲ့ပန်းတွေကိုတော့ကျွန်မအခေါ်အဝေါ်တွေမေ့နေတာရယ်တချို့နာမည်တွေကျတော့မသေချာတာရယ်ကြောင့်မြန်မာနာမည်တွေမရေးတော့ပဲသူ့နာမည်အတိုင်းနဲ့ပုံနဲ့တကွဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Rhododendron and Azalea ( ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့အေးတဲ့အရပ်ဒေသတွေမှာအများဆုံးရှိနေနိုင်ပါတယ် )
Oleander (နွယ်သာကီ )
Daffodils ( နှင်းပန်းဝါ )
English Yew ( ဒါတွေတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူး၊ဥရောပဖက်မှာအရှိများမယ်ထင်ပါတယ် )
Hydrangeas ( ခြောက်လခံ )
Philodendron ( ပိန်းလက်ကြား )
Mistletoe ( ခရစ္စမတ်အသီးပင် )
Water Hemlock (ရေကျောက်ပင် )
These small white flowers might appear in your garden as weeds, and if you have curious pets, you should remove them. White hemlock's toxin (which smells like carrot) attacks the nervous system, and can cause serious harm (seizures, death) to animals and humans.
Ref : HealthDigezt
*ကျန်တဲ့အပင်တွေကိုသိသူများလဲကွန်းမန့်မှာဆက်လက်ပြီး ပြောပြသွားနိုင်ပါတယ်နော်။သေသေချာချာဖတ်ရအောင်လို့ အင်္ဂလိပ်လိုပါဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
26 စက်တင်ဘာလ 2014
ဒေသစံတော်ချိန် 12.30 မိနစ်
အစ်မ မပြောရင် သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခြောက်လခံပန်းဆို တော်တော်လှတာ။
ပိန်းလက်ကြားကိုတော့ ဒီမှာနေရာများများတွေ့ရတယ် ရွှေဒိုးရှင်းပြထားမှပဲသိတော့တယ် တချို့ ထင်းရူးပင်နဲ့တူတာလေးတွေလဲ ဒီမှာတွေ့ရတယ်
အန္တရာယ်စက်ကွင်းအပင်လေးတွေအကြောင်း သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ မဒိုးရေ... ပညာပေးလေးတွေ အမြဲတန်း ရေးတတ်တဲ့မဒိုးရဲ့ ပို့စ်တွေဖတ်ပြီးတိုင်း အိမ်ကအဖွဲ့ကို လက်တို့ဖတ်ခိုင်းစမြဲပဲ ...
သိပ်လှလွန်းတဲ့ပန်းမှာအဆိပ်ရှိသလို သိပ်လှတဲ့လူတွေမှာလည်းအဆိပ်ရှိတတ်တယ်ဆိုတာကို တွေးမိသွားတယ်...ဘယ်ရယ်မဟုတ်ဘူး တွေးမိတာပါ သာမီး...။
သိထားတော့ ဆင်ခြင်လို့ ရတာပေါ့ မဒမ်ကိုးရေ
Rhododendron (တောင်ဇလပ်) တွေကအဆိပ်ရှိမှန်း